Kushandisa Kwamungaita Mari Zvakanaka | Mhuri Inofara
“Zvirongwa zvinosimbiswa kwazvo nokupanana mazano.”—Zvirevo 20:18
Tose zvedu tinoda mari kuti tiriritire mhuri dzedu. (Zvirevo 30:8) Uyezve, “mari inodzivirira.” (Muparidzi 7:12) Semurume nemudzimai, zvingaoma kutaura nezvemari, asi musarega mari ichikonzera matambudziko muwanano yenyu. (VaEfeso 4:32) Murume nemudzimai vanofanira kuvimbana voisa misoro pamwe chete pavanosarudza mashandisiro avachaita mari.
1 RONGAI NOKUNGWARIRA
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: “Ndiani wenyu anoti kana achida kuvaka shongwe asingatangi agara pasi, overenga zvinodiwa, kuti aone kana aine zvakakwana zvokuipedza nazvo?” (Ruka 14:28) Zvinokosha kuti muronge pamwe chete mashandisire amuchaita mari yenyu. (Amosi 3:3) Sarudzai zvamunoda kutenga uye kuti imarii yamungashandisa. (Zvirevo 31:16) Kuva nemari inokwana kutenga chimwe chinhu hakurevi hako kuti munotofanira kuchitenga. Edzai kuita kuti musava nezvikwereti. Shandisai mari yamuinayo kwete yamusina.—Zvirevo 21:5; 22:7.
Kana pakupera kwemwedzi mukaona kuti paurongwa hwenyu hwokushandisa mari pane ichasara, sarudzai pamwe chete zvamuchaita nayo
Kana mari yenyu isiri kukwana, nyatsorongai zvamungaita kuti muderedze zvinokudyirai mari. Somuenzaniso, pane kutenga zvokudya zvakabikwa kare mungaita zvokubika moga
2 BUDIRANAI PACHENA UYE ONAI ZVINHU SEZVAZVIRI
ZVINOTAURWA NEBHAIBHERI: ‘Ita zvinhu zvose nokutendeseka kwete pamberi paJehovha chete, asiwo pamberi pevanhu.’ (2 VaKorinde 8:21) Budira mumwe wako pachena nezvemari yaunotambira uye yaunoshandisa.
Nguva dzose inzwawo zvinofungwa nemumwe wako pakuita zvisarudzo zvakakura zvine chokuita nemari yenyu. (Zvirevo 13:10) Kutaurirana nezvemari kuchaita kuti mumhuri menyu murambe muine rugare. Ona mari yaunowana, kwete semari yako, asi semari yemhuri.—1 Timoti 5:8.
Bvumiranai kuti mumwe nemumwe angashandisa mari yakawanda sei asingabvunzi mumwe
Musamirira kuti dambudziko ritange ramuka kuti muzotaura nezvemari
MAONERO AMUNOITA MARI
Kunyange zvazvo mari ichikosha, musairega ichikanganisa wanano yenyu kana kuti kukuitai kuti muzvidye mwoyo nezvinhu zvisina basa. (Mateu 6:25-34) Hamufaniri henyu kunge muine mari yakawanda kuti munakidzwe neupenyu. Bhaibheri rinoti: ‘Muchenjerere makaro emarudzi ose.’ (Ruka 12:15) Hapana chinhu chinogona kutengwa nemari chinokosha kupfuura wanano yenyu. Saka gutsikanai nezvamuinazvo, uye musambofa makaregeredza ukama hwenyu naMwari. Kana mukaita izvi, mhuri yenyu ichafara uye ichafarirwa naJehovha.—VaHebheru 13:5.
Ndezvipi zvatingaita semhuri kuti tisava nezvikwereti?
Ndirini patakapedzisira kukurukura nemumwe wangu nezvemari yedu tichibudirana pachena?
Kushandisa Mari Zvakanaka Wanano Uye Mhuri
Zvinotaurwa neBhaibheri zvinogona kukubatsira kusarudza.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kushandisa Kwamungaita Mari Zvakanaka